I-Gilalite quartz ibizwa ngokuba yi-medusa quartz okanye i-Paraiba quartz - ividiyo
Thenga i-gilalite quartz yendalo kwivenkile yethu
I-Gilalite quartz ihlala ibizwa ngokuba yi-medusa quartz okanye i-Paraiba quartz ngenxa yombala wezinto ezibandakanyiweyo kwaye iba yindawo yaseBrazil apho ymbiwe
IGilalite yiminerali yesilika yobhedu enekhemikhali ekubunjweni kweCu5Si6O17 · 7.
Kwenzeka njengesigaba sokubuyisa imethamorphic kwidiphozithi ye-calc-silicate kunye ne-sulfide skarn. Kwenzeka njengokugcwaliseka kwe-fracture kunye nokuzaliswa okunxulunyaniswa neekristale zedayide. Ihlala ifumaneka ngohlobo lweespeliles zeentsinga zemitha.
Yachazwa okokuqala ukuba yenzeke kumgodi weKrisimesi we-porphyry kwi-Gila County, e-Arizona ngo-1980 kunye ne-apachite yezimbiwa. Ifumana igama layo kule ndawo. Kukwenziwe ingxelo nakwisithili saseGoodsprings, Clark County, Nevada; IJuazeiro do Norte, I-Ceara State, iBrazil kunye nendawo ye-slag kwiSithili saseLavrion, Attica, Greece.
I-Quartz ikhona ngeendlela ezimbini, i-α-quartz eqhelekileyo kunye neqondo lokushisa temperature-quartz, zombini ziyi-chiral. Utshintsho olusuka kwi-α-quartz ukuya kwi-β-Quartz lwenzeka ngesiquphe ngama-573 ° C. Kuba inguquko ihamba notshintsho olukhulu lwevolumu, inokuphembelela ngokulula ukwakheka kwe-ceramics okanye amatye adlula kulo mqobo wobushushu.